Ubunzima kunye noxinano lwamanzi e-aquarium | Ngeentlanzi
Ubunzima kunye noxinano lwamanzi e-aquarium
UViviana Saldarriaga | | Amanzi akwariyam akwariyam, Amanzi olwandle
Kanye njengoko kufuneka sikhathalele kwaye sigcine iakhawunti iqondo lobushushu kunye ne-pH ye-aquarium yethuUkugcina iintlanzi zethu kunye nezilwanyana zasemanzini zikwisimo esifanelekileyo, kubalulekile ukuba siqwalasele ubukhulu kunye nokuxinana kwamanzi.
Xa sithetha ngazo Ubulukhuni bamanzi, Sibhekisa kwinani leeminerali ezichithakeleyo eziqulathe, ngakumbi ikhalsiyam kunye nemagniziyam. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amanzi athambileyo aya kuba neeminerali ezimbalwa, ngelixa amanzi anzima eya kuba maninzi. Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo iiparameter ezimbini xa ulawula ubunzima bamanzi, i-GH kunye ne-KH. Okokuqala, i-KH bubunzima bethutyana bamanzi, kwaye yiyo eya kuthintela ukuhla kwi-pH, isabele ngeeasidi kunye nokuzinciphisa. Ngakolunye uhlangothi, i-GH yinkxalabo ngokubanzi, oko kukuthi, isamba sobunzima bexeshana kunye nobunzima obusisigxina, obenziwe yi-calcium ne-magnesium sulfates.
Ukuba ufuna ubunzima bokunciphisa amanziInto yokuqala kuya kufuneka uyenze kukususa iiminerali ezichithakeleyo, ke kuya kufuneka usebenzise isixhobo esibuyela umva kwi-osmosis. Olu hlobo lwezixhobo, abakwenzayo kukubambisa ezi minerali, ukuvelisa amanzi athambileyo alungele ezo ndawo zasemanzini eziyifunayo. Ukuba, kwelinye icala, into ofuna ukuyenza kukwandisa ubunzima, kuya kufuneka wongeze ezinye iiminerali.
Ewe Ukuxinana kwamanzi, kubalulekile ukwahlula phakathi kwetyuwa nobulukhuni bamanzi, kuba azifani, nangona zinxulumene ngokusondeleyo. Ubuninzi bamanzi busebenza njengomlinganiso osisiseko wee-aquariums zaselwandle kwaye kulula kakhulu ukuzilawula, kuba i-hydrometer iya kwanela. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba kumanzi acocekileyo, ubukho beetyuwa abubalulekanga okanye abukho, ngenxa yoko akufuneki usebenzise olu hlobo lweemitha, nangona kunjalo une-aquarium enamanzi amtyuba, kuya kufuneka uthathele ingqalelo Amanzi kwi-aquarium yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ubunzima kunye noxinano lwamanzi e-aquarium
Iindidi zeefilitha ze-aquarium
Iingcebiso zokwenza ukuba intlanzi yakho ihlale ixesha elide